Olee Otú Ndịàmà Jehova na Ndị Mmadụ Si Amụ Baịbụl? Ịmụ Baịbụl n’Akwụghị Ụgwọ
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Angolan Sign Language Arabic Arabic (Lebanon) Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Assamese Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bengali Biak Bicol Bislama Bosnian Boulou Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chilean Sign Language Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Colombian Sign Language Croatian Czech Damara Dangme Danish Digor Drehu Dutch Ecuadorian Sign Language Edo Efik English Esan Estonian Ewe Fante Faroese Fijian Finnish Fon Frafra French French Sign Language Ga Galician Garifuna Georgian German German Sign Language Gitonga Greek Greenlandic Guadeloupean Creole Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hiri Motu Hungarian Hungarian Sign Language Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Indonesian Sign Language Isoko Italian Italian Sign Language Itsekiri Japanese Japanese Sign Language Javanese Kabiye Kabuverdianu Kabyle Kachin Kalanga (Botswana) Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabic) Kekchi Khakass Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Konkani (Roman) Korean Krio Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Kyangonde Lahu Lamba Laotian Latvian Lingala Lithuanian Low German Luganda Luo Luxembourgish Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mari Martiniquan Creole Mashi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mexican Sign Language Mingrelian Mixe Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Moore Myanmar Myanmar Sign Language Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Nias Nicaraguan Sign Language Niuean Norwegian Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Otomi (Mezquital Valley) Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Persian Peruvian Sign Language Pidgin (West Africa) Polish Polish Sign Language Pomeranian Portuguese Portuguese (European) Punjabi Punjabi (Roman) Punjabi (Shahmukhi) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Romany (Eastern Slovakia) Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Romania) Russian Russian Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Sign Language Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Sãotomense Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tandroy Tankarana Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvinian Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Arabic) Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruguayan Sign Language Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Venezuelan Sign Language Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Ndịàmà Jehova na-agwa ndị mmadụ ka ha na ha mụwa Baịbụl. Gị na ha mụwa Baịbụl, ọ ga-enyere gị aka:
Ịna-enwe obi ụtọ n’ezinụlọ
Ịmata ihe Chineke kwere nkwa ime n’ọdịnihu
A zara ajụjụ ndị a na-esonụ ndị mmadụ na-ajụkarị gbasara otú anyị na ndị mmadụ si amụ Baịbụl n’isiokwu a
M̀ ga-akwụ ụgwọ tupu a mụwara m Baịbụl?
Ugboro ole ka unu ga na-amụ ihe, nkeji ole ka unu ga-ejikwa na-amụ ya?
Olee otú m ga-esi malite?
M̀ nwere ike ibu ụzọ lee otú ọ na-adị tupu mụ amalite?
Ọ bụrụ na m kweta ka a mụwara m Baịbụl, ọ̀ pụtara na m ga-abụrịrị Onyeàmà Jehova?
M̀ nwere ike iji nsụgharị Baịbụl nke na-amasị m ma anyị na-amụ ihe?
M̀ nwere ike ịkpọ ndị ọzọ ka ha bịa soro anyị ma anyị mụwa Baịbụl?
Ọ bụrụkwanụ na e nweela mgbe mụ na Ndịàmà Jehova mụrụ Baịbụl, m̀ nwere ike ịmalite ya ọzọ?
M̀ nwere ike ịna-amụ Baịbụl n’onwe m n’enweghị onye ga-abịa ka mụ na ya na-amụ ya?
Mmadụ ga na-abịa ka gị na ya na-amụ Baịbụl. Onye ahụ ga-enyere gị aka ịghọta Baịbụl. Unu ga na-eme, unu muchaa otu isiokwu, unu agaa n’ọzọ. Unu ga-eji akwụkwọ bụ́ Na-enwe Obi Ụtọ Ruo Mgbe Ebighị Ebi na-amụ ya. Akwụkwọ a ga-enyere gị aka ịmụta isi ihe Baịbụl na-ekwu nakwa otú ihe Baịbụl na-ekwu ga-esi nyere gị aka. Ị chọọ ịmatakwu ihe ndị ọzọ, lee vidio a.
Mba. Ndịàmà Jehova na-eme ihe Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya. Ọ sịrị: “Unu natara n’efu, na-enyenụ n’efu.” (Matiu 10:8) Ị gaghịkwa akwụ ụgwọ maka ihe ndị i ji amụ Baịbụl. Ụfọdụ n’ime ha bụ Baịbụl na akwụkwọ Na-enwe Obi Ụtọ Ruo Mgbe Ebighị Ebi.
Akwụkwọ ahụ nwere isiokwu iri isii. Ma, ọ bụ gịnwa ga-ekpebi isi ole unu ga na-amụcha mgbe unu na-amụ ihe. Ma, ọtụtụ ndị a na-amụrụ Baịbụl na-ekpebi ịmụcha otu isi ma ọ bụ karịa kwa izu.
1. Dejupụta fọm a dị na jw.org iji kwuo ka a bịa mụwara gị Baịbụl. Ihe anyị ga-eji ihe ndị i denyere ebe ahụ gbasara onwe gị mee bụ naanị ihe i ji maka ya denye ha, nke bụ́ ka Onyeàmà Jehova jiri ya chọta gị ka gị na ya mụwa Baịbụl.
2. Onye gị na ya ga na-amụ Baịbụl ga-achọ gị abịa. Ọ ga-agwa gị ihe ndị ị ga-atụwa anya ịmụta ka unu na-amụ Baịbụl, ọ ga-azakwa ajụjụ ọ bụla i nwere.
3. Gị na onye gị na ya na-amụ ihe ga-ahazi otú unu ga-esi na-amụ ya. Unu nwere ike na-amụ ihe ihu na ihu ma ọ bụkwanụ unu esi n’ekwentị na-amụ ya. Unu nwekwara ike iji akwụkwọ ozi ma ọ bụ ozi iimel. O nwere ike iwe unu ihe dị ka otu awa iji mụọ ihe. Ma, ọ bụghị iwu. O nwekwara ike ghara iru otu awa ma ọ bụkwanụ ya akarịa ya. Ọ bụ otú oge gị hà ga-ekpebi mgbe unu ga-anọru.
Ee. Ọ bụrụ ihe ị chọrọ ime, biko dejupụta fọm a dị na jw.org. Ọ bụrụ na mmadụ abịa ka gị na ya mụwa Baịbụl, gwa onye ahụ na ị ga-achọ ibu ụzọ lee otú ọ na-adị tupu gị amalite ịmụ Baịbụl ka ị mara ma ọ̀ ga-amasị gị. Gị na ya ga-eji broshọ bụ́ Na-enwe Obi Ụtọ Ruo Mgbe Ebighị Ebi mụọ ihe ka ị mara ma ọ̀ ga-amasị gị. Broshọ ahụ nwere isiokwu atọ.
Mba. Obi na-atọ Ndịàmà Jehova ụtọ ha na ndị mmadụ ịna-amụ Baịbụl, ma, anyị anaghị amanye ndị anyị na ha na-amụ Baịbụl ka ha bụrụ Ndịàmà Jehova. Kama, anyị na ha na-amụ ihe Baịbụl kwuru, anyị ahapụzie ha ka ha jiri aka ha kpebie ihe ha ga-ekwere.​—1 Pita 3:15.
Ee. I nwere ike ịna-eji nsụgharị Baịbụl ọ bụla dị gị mma. Ọ bụ eziokwu na ọ na-amasị anyị iji Baịbụl Nsọ nke Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ amụrụ ndị mmadụ ihe n’ihi na a sụgharịrị ya nke ọma, ọ dịkwa mfe nghọta, ma, anyị ma na ọtụtụ ndị na-achọ ịna-agụ nsụgharị Baịbụl ndị masịrị ha, ndị ha dị mbụ agụ.
Ee. I nwere ike ịkpọ ndị ezinụlọ unu niile ma ọ bụkwanụ ndị enyi gị.
Ee. N’eziokwu, otú anyị na ndị mmadụ si amụ Baịbụl ugbu a ga-atọ gị ezigbo ụtọ karịa ka ọ tọburu gị maka na a hazigharịala otú anyị si amụ Baịbụl ka ọ daba n’otú ihe si dịrị n’ụwa ugbu a. E nwekwuola ọtụtụ vidio ndị anyị ga na-ele ma anyị na-amụ ihe, nweekwa ihe ndị ọzọ anyị ga na-akọwa.
Ee. Ọ bụ eziokwu na ọtụtụ ndị na-achọ ka ha na mmadụ na-amụ Baịbụl, ma, ọ na-aka amasị ụfọdụ ka ha buru ụzọ na-amụtụ ya n’onwe ha. Anyị nwere ihe dị iche iche ga-enyere gị aka ịmụ Baịbụl n’onwe gị. O nweghị nke n’ime ha ị ga-akwụ ụgwọ nweta. Lee ihe ndị ahụ ga-enyere gị aka:
Vidio Ndị E Ji Amụ Baịbụl. Ha bụ obere vidio ndị na-akọwa ihe Baịbụl na-akụzi.
Ajụjụ Ndị Baịbụl Zara. Ha bụ isiokwu ndị na-aza ọtụtụ ajụjụ ndị mmadụ na-ajụ gbasara ihe ndị dị na Baịbụl.
Amaokwu Baịbụl Ndị A Kọwara. Chọpụta otú e si kọwaa ụfọdụ amaokwu Baịbụl ndị mmadụ ma nke ọma.
Na-enwe Obi Ụtọ Ruo Mgbe Ebighị Ebi—Malite Ịmụ Baịbụl
I nwere ike iji akwụkwọ a malite ịmụ Baịbụl. Anyị nwekwara ike ịna-abịa ka anyị na gị na-amụ Baịbụl n’anaghị gị ego.
A ga-eji Baịbụl zaa gị ajụjụ ị jụrụ, ma ọ bụkwanụ mee ka ị matakwuo gbasara Ndịàmà Jehova.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Olee Otú Ndịàmà Jehova na Ndị Mmadụ Si Amụ Baịbụl?